Fakkaachuu fi ta’uun tokko ta’uu hin danda’u. Garaa garummaa guddatu jechoota kana lamaan gidduu jira. Wanneen uumaadhaan wal fakkaatanheduudha. Wal fakkkaatuu bira taranii tokko ta’uu garuu hin danda’an. Abbaan daadhii dhugeef ilma afaan hin urgaahu sababaan Oromoon jedhee mammaakuufuu tokko kanaafiidha. Ilmi namaa haalaa fi amalaan, bifaa fi sagaleen, hojjaa fi hojiin hamma tokko wal fakkaachuu ykn walitti dhihaachuu ni danda’a ta’a. Dhibbaa dhibbatti tokko ta’uu garuu hin danda’u. Waan wal nama fakkeessu haasawuu fi hojjachuu danda’uun tahiinsa salphaadha. Tokko ta’anii waan tokko uumuun garuu waan hin haffallatne. Mana gara garaa keessaa yaa’anii karaa tokko irra imalanii galgala manuma mana isaaniitti akkuma deebi’anii galan yaada gara garaa qabatanii karaa tokkicha irra yaa’aa oolanii galgala yaada mata mataa qabatanii gara mana mana isaanittiin galuun akka danda’amu beekuun barbaachisaadha. Ganama keenyaan bobbaafatanii galgala kiyyaan keessaa galfatu akkuma jedhamu wanti wal fakkaatu cufti tokkuma jedhanii itti amananii fudhatanii maxxanfachuun miira guutuudhaan faana gugatuun dogongora guddaadha. Wanneen gubbarra wal fakkaatan kessa isaaniin gargar ta’uu akka malan dagachuu waan hin malleedha.